Booqo Switzerland cusub: Hoteelada ay ku shaqeeyaan Robots uma baahna Wadooyin & Baabuur, laakiin Lamas, Ariga, iyo Muuqaallada Neefta leh.
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Booqo Switzerland cusub: Hoteelada ay ku shaqeeyaan Robots uma baahna Wadooyin & Baabuur, laakiin Lamas, Ariga, iyo Muuqaallada Neefta leh.
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • Dadka • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
sumcada sawirka: Elisabeth Lang
Waxay ahayd xiisaha, fursadaha isku xirnaanta, wadahadalada ganacsiga ee keenay hoteelada iyo in ka badan 100 la-hawlgalayaasha bandhigga, kuwaas oo si wada jir ah ugu adeegay warshadaha Hoteelka kadib ku dhawaad ​​600 maalmood oo maqnaansho aamusnaan ah sababtuna tahay xayiraadaha Corona oo aan dhammaanayn.
Halle 550 waxay ka fog tahay Goobihii Hoteelada 5-xiddiglaha ahaa ee bilicda iyo soojiidashada lahaa ee Zurich, halkaas oo sida caadiga ah lagu qabto shirkan noocan ah.
Shirweynihii ugu horeeyey ee Martigelinta Hotellerie Suisse ee Switzerland oo ay soo qabanqaabisay Hotelrevue, oo ah daabacaad ganacsi oo maxalli ah, ayaa soo jiitay in ka badan 1152 ka -qaybgalayaasha toddobaadkan.
Munaasabaddu waxay hoosta ka xariiqday muhiimadda wada -hadalka shaqsiyeed ee adduunkeena cusub ee digitalization -ka iyo xafiisyada guryaha.
Halle 550 waa goob ku taal Zurich Oerlikon.
Kulanka Martigelinta ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ka dhaca Switzerland tan iyo markii COVID-19 uu noqday masiibo bishii Maarso ee 2010
Si loo badbaadiyo dadka soo booqda, qof walba waa inuu muujiyaa shahaadada tallaalka (Green Pass). Kuwa aan la tallaalin, waxaa loo baahday baaritaan xun oo COVID-19 ah.
Waxaa la yaab leh in aysan jirin siyaasad maaskaro, ka dib markii ay soo martay bar -kontoroolkii oo galay Halle 550. Tani waxay dhakhaatiirta ka dhigtay waxoogaa shaki ah laakiin ka -qaybgalayaashu aad bay u farxeen.
Maaskaro la'aan halkii neefsasho la'aan - la jaanqaad dhaqdhaqaaqyada
“Wadajir Wanaagsan” wuxuu ahaa sumcadda Madaxweynaha Hotellerie Andreas Züllig khudbadiisii ​​furitaanka.
“Waxaan u baahanahay inaan horumarinno xeelado cusub oo Faafa kadib, sidaan gacanta ugu gelinnay maareynta dhibaatooyinka fikrado hal abuur leh. Huteellada iyo ganacsatade ahaan, annagu ma nihin hoggaamiyeyaal keliya ee waxaan kaloo nahay kuwa garwaaqsan isbeddellada iyo dareenka suurtogalnimada oo ku dhaqma aragti fog.
Sidee bay u ahaan doontaa Dalxiiska Swiss -ka masiibada kadib?
Laakiin waxa warshadaha soo -dhoweynta, shirkadaha diyaaradaha, iyo Warshadaha dalxiiska runtii u baahan yihiin weedh rajo wanaagsan leh.
Waxaa jiray hadal badan oo ku saabsan hal -abuurnimada iyo digitalization -ka, laakiin ka -qaybgalayaashu dhab ahaantii maxay rabeen?
Robot-ka soo gelitaanka?
Tani hore ayay u dhaaftay oo sanado ka hor ayaa laga dooday. Maxaan runtii uga baahannahay Adduunkeenna Faafa ee dambe?
Waxa kaliya ee aan u baahanahay ka dib markii qufullo badan oo guriga la joogaa ay yihiin habsiin.
Sii martida hab!
Socotada si ka badan sidii hore waxay u baahan yihiin dhoollacaddeyn weyn iyo soo dhaweyn diirran oo soo dhaweyn ah waa sida ugu fudud.
Si kastaba ha ahaatee, waaya -aragnimada dhabta ahi waxay ahayd minibar -robot -ka (oo uu qoray Robotise, Jarmalka) oo cabbitaankii la rabay toos u keenay qolka martida.
Su'aashaydu waa intee qiimaha robotkan?
Jawaabta fudud waxay ahayd robot -ka oo la mid ah kabalyeeri.
Laakiin tani waxay ku kala duwanaan kartaa meelaha mushaharka badan ee laga bixiyo Switzerland iyo mushaharka laga bixiyo waddamada jaban, sida Aasiya.
Laakiin ma fiicantahay in la helo robotyo aan la qarxin oo u adeegaya cabitaannadaada inta uu jiro masiibada, adigoo mar kale aamusnaanaya marba haddii baytariyadu sii jiraan?
Wadahadallada guddiyada oo ay la yeesheen 84 ku hadla oo qaatay makarafoonnada ayaa ahaa qodobbada muhiimka u ah Kulanka Martigelinta ee 2021
Dalxiiska ayaa si aad ah loo garaacay, ayay faallo ka bixisay Urs Kessler, oo ah maamulaha guud Jungfrauen Bahnen, dood ku saabsan goorta ay suuqyada caalamiga ah soo laaban doonaan.
Ma jiro saadaal.
Suuqii gudaha ee Switzerland laga soo bilaabo sanadkii hore (2020) ayaa hoos u dhacay.
Swiss -ka ayaa mar kale dibadda u baxaya. Si kastaba ha ahaatee dalxiiska Switzerland ayaa tirooyin aad u fiican ka helaya Jarmalka, Belgium, iyo UAE.
Kahor masiibada, Switzerland waxay lahayd in kabadan 70% qolalka martida oo ay deganaayeen booqdayaal ka yimid Aasiya.
Soo noqoshada booqdayaasha Shiinaha ka dib Ciyaaraha Olombikada ayaa noqon doonta mid go'aan leh. Switzerland waxay ku leedahay laba mashruuc oo rajo leh Aasiya sanadka soo socda. Dalxiiska Switzerland wuxuu leeyahay shaqaale xayeysiin ah oo fadhigoodu yahay Shiinaha, Hindiya, Koonfur -galbeed, iyo Koonfur -bari Aasiya. Sida laga soo xigtay dadka u dhuun daloola, waxaa jira dalab weyn oo dalxiis oo ka socda gobolkaas.
Suuqyada sida Hindiya, Koonfur Bari Aasiya, iyo Brazil ayaa soo laaban doona. Waa hubaal in Hindiya ay u beddeli lahayd Switzerland. Laakiin tallaalku waa arrinta muhiimka ah oo ay weheliso farsamaynta fiisooyinka oo casri ah oo fudud.
Halle 550 ee Zurich: Goobta Kulanka Martigelinta
Waxaynu ku noolnahay xukun keli talis ah oo aan ahayn tallaal ayuu yidhi Dieter Vranck Maamulaha Shirkadda Duulimaadyada Caalamiga ah ee Switzerland: 90 % shaqaalahayaga Cabin Crew waa la tallaalay laakiin waa inaan u daboolnaa kuwa aan la tallaalin.
Xaaladaha si joogto ah isu beddelaya marka la safrayo waa dhibaato aad u weyn. Tallaalku waa tigidhka furaha ah si aad u hesho boos adag. Duulimaadyo badan ayaa faaruq ah, laakiin isla marka karantiilnimada kor loo qaado - ballansashada ayaa cirka isku sii shareereysa.
Nasiib wanaag waxaan helnaa kooxo badan oo ka imaanaya Mareykanka. Caddadka martida ka timaada Ameerika waa mid aad u sarreysa sidii ka hor masiibada.
Laakiin weli uma safri karno Ameerika, mana sii socon karno annaga oo aan u safrin USA muddada fog. Duulimaadyada Xamuulka la'aanteed, waxaan ku yeelan lahayn duulimaadyo madhan badh waddooyinkayaga Mareykanka.
Duulimaadyada meheraddu si tartiib ah ayay u soo kaban doonaan laakiin waxaan filaynaa in laga jaray 30 % illaa 2023. Waxaan haysannay sannad rikoor ah sannadka 2019 oo aan ka helnay 53 milyan oo macaash ah.
Sanadka 2022 sidoo kale caadi kuma soo noqon doono- laakiin Yurub waa soo koreysaa; Kaalinta 2aad ee USA iyo kaalinta 3aad Aasiya ayaa sharraxaysa Vranckx. Waxaan ku jirnaa xaalad aynaan wax badan gelin karin hal -abuurka.
Airfaresku waxay ahaan doonaan kuwo joogto ah, ayuu yidhi Vranckx, oo ah maamulaha guud ee Swiss.
Shirka Martigelinta 2021
In kasta oo Martin Nydegger, oo ah Agaasimaha Dalxiiska Switzerland, uu dadka oo dhan ka codsanayo isagoo leh: “Tallaala, ma fiicna laakiin waa muhiim.” Ma haysanno waqti aan ku sugno waaxdeena. In ka badan Dalxiiskii waa dhamaaday.
Nydegger wuxuu kalsooni ku qabaa in suuqyada caalamiga ah ay soo laaban doonaan marka la gaaro 2023. Switzerland waa dal qiimo weyn u leh booqdayaasha. Waxay leedahay tayo, ma aha su'aal suuqgeyn.
Ganacsiga MICE, xilli 2019 wuxuu ku dhammaaday si weyn.
Ma jiraan wax sidaas oo kale ah oo waxaan ka hadlaynaa mugga 5 % 2021.
Waxay kaloo qaadataa shaqaale yar hadda.
Laakiin ganacsiga Jiirku ma noolaan karaa?
Warshadaha hoteelka MICE ee Switzerland ayaa lagu qasbi doonaa inay ku ballansadaan aaladaha sida booking.com, saacadaha, halka dhallinyaradu ay aadi karaan Google si ay u ballansadaan hoteellada shirarka.
48% ballansashada waxaa lagu sameeyaa mobilada iyadoo la adeegsanayo aaladaha sida mobilada oo kale. Hoteelada shirarka ayaa sidoo kale lagu ballansan karaa Amazon, ama Xulashada Kulamada, taas oo raad weyn ku reebaysa qorsheeyeyaasha shirarka.
Hoteelka Abaalmarinta Sanadka waxaa markii ugu horreysay loo soo bandhigay Nadja iyo Patric Vogel oo ka tirsan Fairytale Hotel Braunwald (4 Stars).
Waxaa aad looga hadlay hal -abuurnimada iyo digitization -ka, laakiin huteelkan xitaa ma laha waddo uu halkaas ku tago.
Braunwald waa baabuur la'aan.
Braunwaldbahn wuxuu kaa qaadaa ilaa nus saac kasta saldhigga dooxada. Waxaa ku salaamaya Lamas, Riyo markaad marayso “buundada Riyaha Dahabka ah”.
Lo'do faraxsan, digaagado mashquulsan oo bakaylaha qallafsan, iyo muuqaal qurux badan ayaa ku sugaya.
Waa maxay sababta Hotel Fairytale?
Waqti dheer kahor gabar yar ayaa maqaayadda si weyn ugu ooyneysay waxayna istaagtay kaliya markii milkiilaha Fridolin Vogel uu ballanqaaday inuu u sheegi doono sheekooyinkeeda.
Illaa maanta dhaqankani wuxuu ku nool yahay oo u dabbaaldegaa maalin kasta Nadja an Patric Vogel. Waa hagaag! HAMBALYO!